Chii chinonzi Bitcoin Hero - Nezvedu
Nezve Bitcoin Hero
Chii chinonzi Bitcoin Hero?
Kutevera dambudziko repasi rose rehupfumi ra2008, pakange paine kurudziro yeshanduko mukati meiyo ecosystem. Iyo Bitcoin whitepaper yakaburitswa gore iro, uye yekutanga cryptocurrency yakavhurwa gore rinotevera. Nekubuda kweBitcoin uye mamwe madhijitari, ivo vaionekwa semberi kwemari.
Iwo maficha mazhinji emari yemadhora, senge pachena, kuendesa masimba kumatunhu, zvinowoneka, zvisina muganho, uye zita rekunyepedzera, rinovaita vakwezve. Kunyangwe paine hunhu hwavo hunokwezva, vashoma chete varimi vakatora njodzi yekuenda munzvimbo ye crypto. Aya masimari ekutanga vaitenda muiyo cryptocurrency hope, dzakasimbiswa neyakavakirwa blockchain tekinoroji.
Chiito chemutengo weBitcoin mumakore gumi ekutanga chakapfuura zvaitarisirwa. Yakatanga kubva pazasi pemadhora 1 kuti isvike pakakwirira kukosha kwemadhora zviuru makumi maviri mukati memakore masere. Kubva ipapo, kudiwa kwemakristcheni akachinja sezvo vanhu vazhinji vakavaona sechitoro chakakura chekukosha pane kungoita imwe mari. Vatengesi vekutanga vakaita purofiti yakakura kubva ku2017 nzombe inomhanya yemusika we crypto. Vanhu vazhinji vakatanga kutarisa iyo crypto nzvimbo vachitsvaga inotevera 'Bitcoin' kuitira kuti ivowo vagodyara mazviri.
Zano iro harina kubuda sezvanga zvichitarisirwa. Misangano yakatevera haina kusvika kumatunhu epamusoro akambosvika neBitcoin. Zvisinei, mari yemadhora inoramba ichishanduka, uye iri rakanakisa mhando kune vatengesi vepamhepo. Vemari vanowana kuti vawane mari kubva pamutengo shanduko muzvinhu. Mune ino chikamu, ma cryptocurrencies anokurumidza kuve anobatsira ekutengesa zvinhu.
Kunyangwe zvakadaro, zvaisave nyore kuti unzwisise mutengo kusagadzikana kwemakristcheni. Saka nekudaro, isu takagadzira iyo Bitcoin Hero software yekubatsira vatengesi kuti vawedzere mikana ine mari yekutengesa mukati memusika we crypto. Yedu software inoisa yepamusoro-notch mazuva ekutengesa matekinoroji uye marongero ekutengesa Bitcoin uye mamwe ma cryptocurrencies. Nekuda kweizvozvo, nhengo dzese dzenharaunda yeXXFNxxx dzinowana mari shoma pamadhora chiuru pazuva. Iva chikamu chenharaunda yakasarudzika nhasi uye tanga kuwana mari yezuva nezuva.
Kutanga kuwana mari yekugara uchishandisa iyo Bitcoin Hero software!
JOINA IZVI - VHURA YAKO YEMAHARA AKAITI
Sezvo cap yemusika nemikana mukati meiyo crypto nzvimbo yakawedzera, pakanga paine chikonzero chekubatsira vatengesi nevashambadziri kuti vavashandise uye vawane purofiti yakakura. Ichi ndicho chikonzero takagadzira iyo Bitcoin Hero software. Dare rekuvandudza, rinoumbwa nenyanzvi dzakasiyana siyana, rakabatanidza ruzivo rwavo kugadzira software yekutengesa yepasirose. Chikwata ichi chakaumbwa nevanoziva veteran vatengesi vemari, economists, masvomhu, uye vanotungamira vanogadzira.
Mushure mokunge Bitcoin Hero yagadziriswa, yakaenda kuburikidza nechikamu chekuyedza beta. Vaviri vane ruzivo, uye vatengesi vevacheche vakawana mhedzisiro yakafanana kubva muchikamu chekuyedza. Kubva iyo Bitcoin Hero yakatanga kurarama, zvachinja iro ramangwana remari revazhinji vanoita mari kutenderera pasirese. Isu tave kukupa iwe mukana wekujoinha boka iri uye kuwedzera ruzivo rwevatengesi vemari vepamusoro munyika mahara uye kuwana purofiti yezuva nezuva.
JOINA iyo Bitcoin Hero RUDZIMAI IZVOZVI!